May 2014 - iftineducation.com
Maxkamadda ciidamada oo xukun dil ah ku riday raggii dilay gabar ardayad aheyd: SAWIRRO
aadan21 / May 31, 2014
iftineducation.com – Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida ayaa xukun dil toogasho ah ku ridday labo nin oo ku eedeysnaa dilkii Nafiso Cusmaan Salaad oo aheyd gabar ardayad ka qalan jabisay kuliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, taasoo bishii hore lagu dilay agagaarka warshada Coca-cola. Labadan wiil oo lagu kala magacaabo Xasan Salmaan iyo Shaafici Cabdicasiis ayaa waxaa wehlisa Haweeney lagu magacaabo Deeqa Dirac…
10 Qodob Oo Marwadu Ay Ku Kasban Karto Qalbiga Ninkeeda
iftineducation.com – Marwo weliba oo saalixat ah waxey jeceshahay ineey hanato qalbiga ninkeeda weliba aay u noqoto raalliyo uu ku nasto si uusan u damcin haweenka ayada lamid ah. Gabadha raalliyada ahi waxey aaminsantahay haduu ninkeeda waxa uu ka doono uu ka waayo inuu dumar kale u raadsanayo sidaa darteed waxeey isku taxluujisaa ineey buuxiso indhihiisa iyo qalbigiisa… 1- Carabkaaga Haku…
Daawo: Gacliye, Naftan samirka loo diiday wa in ay iilka kula seexata!! + Gabar dardaarmaysa Ugu Dambeyntina Is….
iftineducation.com – Waa dardaaran gabar Soomaaliyeed oo wiilkii ay kaclayd laga dilay ” Qaasim waan ku jaclahay gacliye ,waxaan gacliye ku jaclaaday si dhab ah,iyo in aad tahay dadka oo dhan ruuxa igu dhow,waxaan ku jaclaaday in aad tahay ruuxa kaleya ee ila wadaagay wax aan la iibsan karin,waxaan ahay gacliyo nafta kaliya ee dhibtaa ka murogoonaya islamarkaana farxada uga tagaysa,;;…
Fanaanad u qaab eg Fartuun Birimo oo muqdisho ka soo baxday + Video…
iftineducation.com – Fanaanada Shaado oo ka mid ah fanaaniinta isdebajooga dhawaan uga soo baxay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay muuqaalka heestii Ha iga dheeraanin . Shaado muuqaalkeedan cusub oo ah mid qurux badan waxey ku soo bandhigtay Labis soo jiidasho leh iyo style qurux badan. Dad badan ayaa waxaa layaab ku noqotay muuqaalka quruxda badan ee lagu duubay magaalada Muqdisho oo…
Daawo Lil Baliil Iyo Doni B oo soo saray Muuqaal Cajiib Ah + Video
iftineducation.com – Fanaaniinta heesaha Rapka qaado oo ah Fanaaniin da,yar oo inta Badan dhalinyarada xiligaan ay aad u jacelyihiin fankooda, ayaa soo Saray muqaalka Heesta One Way, oo ah Hees aad u macaan. Labadaan fanaan ayaa samayay koox ay u bixiyeen magacyadooda oo soo gagabiyeen , waana markii iyaga oo koox ah ay soo bandhigaan hees buuqaal ah Lil Balii Iyo…
Daawo Fartuun Omar oo Soo sartay Muuqaal ay xeeb ku duubtay + Video…
iftineducation.com – Fanaanada Codka iyo Jirka macaan Fartun Omar ayaa soo saartay muuqaalka Heesta Cusub Wanag , waxaana heestaan lagu soo duubay Magalada Las Vages ee cariga Maraykanka . Faruun Omar oo muuqaalka heestaa la soo baxday stayl aan hore loo arag waxaayna heesteedaa soo jiidatay Kumanaan tageerayaasheeda ah oo dunida ku firirsan. Sidoo Kale Fartuun oo mudooyinkaan wax muuqaal ah…
iftineducation.com – Qore: Muxyadiin Xuseen Ciid Safarkii uu dhawaan uga qaybgalay caleemasaarka Boqorka Daarood Boqor Burhaan Boqor Muuse, Madaxweynaha Dadyowga Suqadara iyo Al-Mahra, ahna Sultanka guud ee shacabka Mahra, Sultan Abdalla Sultan Isse Sultan Ali Al-Cafrar, ayaa runtii aheyd mid taariikhda baal dahab ah ka gashay, tanoo aheyd booqashadiisii ugu horeysay ee Sultanka Mahra iyo Suqadara cagaha ku soo dhogo gayiga…
DAAWO VIDEO:- AMISOM oo soo badbaadisay 30 qof oo Al-Shabaab shalay afduubatay
iftineducation.com – Howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Maamulka Juba ayaa waxay kusoo badbaadiyeen 30 qof oo rag iyo haween isugu jira, kuwaasi oo shalay Al-Shabaab ka afduubatay deegaan lagu magacaabo Baar Caleen oo u dhow magaalada Kismaayo. Dadkan ayaa ah ganacsato qaadka iibisa, iyadoo shalay ay Al-Shabaab gacanta ku dhigeen xili ay qaadka gelin…
VIDEO:- Spain oo lagu qabtay Lix nin oo Al-SHABAAB ka tirsan oo ciidamo u diri jiray dalal ay Somalia ka mid tahay
iftineducation.com – Ciidamada dalka Spain ayaa xabsiga dhigay Lix nin oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin Urur weynaha Al-Qaacida. Howlgal ay ciidamada Booliska Spain sameeyeen ayaa lagu soo qabtay Lixdan nin, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay maliishiyaadka u qori jireen Al-qaacida, kadibna u diri jireen dalalka ay ka mid yihiin Mali, Soomaaliya iyo Libya. Xubnaha la qabtay ayaa…
DAAWO SAWIRADA:- Madaxa cusub ee booliska AMISOM oo jagada la wareegay
iftineducation.com – Mr. Anand Pillay ayaa lagu soo wareejiyay xarumaha ciidamada booliska AMISOM ee magaalada Muqdisho, waxaana ay isbarteen saraakiisha iyo howl-wadeenada booliska AMISOM. riix halkaan daawo video Madaxan cusub oo dal ahaan kasoo jeeda Koonfur Afrika ayaa waxaa uu xilka kala wareegayBenson Oyo-Nyeko.